Izitayela eziyisishiyagalombili zokuphrinta kwephakeji yomhlaba wonke-iBlog-Book Printing China
Sivulekile futhi siyalulama ukukhiqizwa njengokujwayelekile . Sizophrinta futhi silethe imikhiqizo yakho ngesikhathi. Siyakwamukela ku sithumele i-imeyili,sizokuphendula emahoreni amabili, Ngiyabonga.
Ukuphrinta Kwencwadi Yezingane
Ukuphrinta Kwencwadi Eqinile
Ukuphrinta Kwencwadi YeBhodi
Incwadi Yesihlalo Sesihlalo
Kuvunguza & Incwadi Eboshwe Ngocingo
Incwajana & Incwadi Yezincwadi
Iphosta & Ukuphrinta Amakhadi
I-Flyer & Ukuphrinta Kwamaphepha
Uhlelo Lokuhlola Ikhwalithi
MOQ(Ubuncane Order Ubuningi)
Isisindo sephepha nephepha elidumile
Thola Quote Ngokwezifiso Manje!!
Ukuphrinta Kwencwadi Yesoftware
Ukuphrinta Kwethebula Lethebula
Ukuphrinta Kwencwadi Yezithombe
Ukuphrinta Incwadi Yemibala
Ukuphrinta Kwencwadi Yokupheka
Ulapha : Ikhasi lasekhaya>Blog
Izitayela eziyisishiyagalombili zokuphrinta kwephakeji lomhlaba jikelele
isikhathi: 2019-12-11 Okuhamba phambili kwe-: 56
Kuthiwa imakethe yokupakisha inamandla angenamkhawulo, kodwa zingaki lezi 8 izitayela zokupakisha komhlaba uyazi? Lolu lwazi luzoba wusizo ku- China ukuphrinta.
Okwemikhiqizo eminingi, le fokuvelayo kokuqala kubalulekile leso sidingo ukwazi. Njengazo zonke izinhlobo zokumaketha, iyashintsha namakhasimende' ukunambitheka nemizwa -- njengokufunwa kwamanje kokupakisha okusimeme.
Nayi imikhangiso eyisihluthulelo eyisi-8 okufanele ukunakwa manje:
1. Umbala ogqamile
Standing out from the crowd isn't the only challenge brands face. Kumele futhi bahluke ezinxushunxushwini zamasayithi e-commerce.
Ukupakisha kwenza okungaphezu nje kokuvikela umkhiqizo. Kungumkhiqizo wobuciko nokwakhiwa, okuzovusa isithakazelo sabathengi.
3. Ukupakisha okusimeme
Abathengi bafuna ukupakishwa okulungele imvelo. Lokhu kuyindlela yokupakisha. Iningi lemikhiqizo emikhulu izama ukusebenzisa izinto ezenziwe kabusha emaphaketheni azo.
Simple ukupakisha kuchazwa njengokupakisha okuqukethe imininingwane edingekayo kuphela.
5. Isifiso seRetro
Ukupakisha kwe-Retro kungahle kube okuphambene nemibala egqamile nokupakisha kwanamuhla, but it's also popular with consumers. Badonselwa ekupakisheni kwe-vintage ngoba ihlobene nezinkumbulo zabo zamasiko futhi ihlangana kalula nabo.
6. Ukupakisha okusobala kunengqondo ngokwengeziwe
Ukupakisha kokudla okungafihli sekuwumkhuba wokuklama wokupakisha ophezulu. Abathengi ngokuya befuna ukwazi ukubona imikhiqizo yangempela abayithengayo.
7. Khulisa isipiliyoni samakhasimende
"Unboxing" amavidiyo ku-YouTube ngokusobala athandwa kakhulu. Abathengi bayajabula lapho bevula iphakethe ukukhombisa lokho abakuthengile.
8. Kuhlobene nomsebenzi wakho
Ukumaketha kwezinzuzo kuyisu lamabhizinisi emikhiqizo ukukhuthaza imikhiqizo yawo ngezenzo ze-CSR.
It's time to think of packaging as a need, kunokuba umane uyingeze ezindaweni zokulahla udoti. Ngakho-ke manje sidinga ukucabanga kabanzi nge izikhwama zamaphepha e-china ukuphrinta.
Ngeminye imininingwane mayelana lokho, ngicela unake www.bookprintingchina.com, noma wenze i-aphoyintimenti ngqo ukubona imboni nge sales@bookprintingchina.com.
Okwangaphambilini Ikhasi : Inkampani yokuphrinta indlela eyishumi yokususa uthuli
Ikhasi Elilandelayo : Ukuphrinta kwezincwadi - Ungakugwema kanjani ukuqina koyinki okubangelwa ukushisa okuphansi
Copyright © 2020 BookPrintingChina.com Wonke Amalungelo Agodliwe.